1 VaKorinde 16:1-24
16 Zvino pamusoro pokuunganidzira+ vatsvene+ zvinhu, sezvandakarayira ungano dzeGaratiya,+ imi itaiwo saizvozvo. 2 Zuva rokutanga kwevhiki roga roga mumwe nomumwe wenyu ngaatsaure chimwe chinhu ari kumba kwake achichengete, maererano nokubudirira kwaangave achiita, kuti pandinosvika kuunganidza kurege kuitwa panguva iyoyo. 3 Asi pandinosvika ikoko, chero vanhu vamunenge mabvumira netsamba,+ ndichavatuma kuti vaende nechipo chenyu chomutsa kuJerusarema. 4 Zvisinei, kana zvichikodzera kuti ini ndiendewo ikoko, vachaenda neni ikoko. 5 Asi ndichauya kwamuri pandinenge ndapfuura nokuMakedhoniya, nokuti ndiri kupfuura nokuMakedhoniya;+ 6 uye zvichida ndichagara kana kutopedza mwaka wechando ndinemi, kuti mundiperekedze+ zvishoma kwandingave ndichienda. 7 Nokuti handidi kukuonai iye zvino pandinenge ndichipfuura, nokuti ndinotarisira kuramba ndinemi kwenguva yakati,+ kana Jehovha+ akabvumira.+ 8 Asi ndicharamba ndiri muEfeso+ kusvikira pamutambo wePendekosti; 9 nokuti ndakazarurirwa suo guru rebasa,+ asi pane vashori vazhinji. 10 Zvisinei, kana Timoti+ akasvika, itai kuti arege kutya pakati penyu, nokuti ari kuita basa raJehovha,+ sezvandiri kuitawo. 11 Naizvozvo, ngaparege kuva nomunhu anomuzvidza.+ Muperekedzei zvishoma norugare, kuti asvike kuno kwandiri, nokuti ini nedzimwe hama takamumirira. 12 Zvino pamusoro paAporo+ hama yedu, ndakamuteterera kwazvo kuti auye kwamuri pamwe chete nedzimwe hama, asi akanga asingambodi kuuya iye zvino; asi achauya kana awana mukana. 13 Rambai makamuka,+ mirai makasimba mukutenda,+ rambai muchiita sevarume,+ ivai nesimba.+ 14 Zvinhu zvenyu zvose ngazviitike norudo.+ 15 Hama, zvino ndinokurayirai kuti: Munoziva kuti imba yaStefanasi ndiyo zvibereko zvokutanga+ zveAkaya uye kuti yakazvipa kuti ishumire vatsvene.+ 16 Rambaiwo muchizviisa pasi pevanhu vakadaro uye pomunhu wose anoshandira pamwe nevamwe uye anoshanda nesimba.+ 17 Asi ndinofara nokuvapo kwaStefanasi+ naFochunato naAkaiko, nokuti vakatsiva kusavapo kwenyu pano. 18 Nokuti vakazorodza mwoyo*+ wangu nowenyu. Naizvozvo bvumai varume vakadaro.+ 19 Ungano dzeEzhiya dzinokukwazisai.+ Akwira naPriska pamwe chete neungano iri mumba mavo+ vanokukwazisai nomwoyo wose munaShe. 20 Hama dzose dzinokukwazisai. Kwazisanai nokutsvoda kutsvene.+ 21 Heino kwaziso yangu, yangu ini Pauro, yanyorwa noruoko rwangu.+ 22 Kana munhu asina rudo rukuru naShe, ngaave akatukwa.+ Haiwa imi Ishe wedu, uyai!+ 23 Mutsa usina kukodzera kuwanwa waShe Jesu ngauve nemi. 24 Rudo rwangu ngaruve nemi mose muri pamwe naKristu Jesu.
^ 1VaK 16:​18 Kureva, “mudzimu.”